YEYINTNGE(CANADA): Monday, July 11
စာနှင့်ဓါတ်ပုံ ကို ငြိမ်းအေးအိမ်၏ ဖေ့စ်ဘွတ် အယ်လ်ဘန်မှတဆင့်ဖေါ်ပြပါသည်။
“တမူ”တံတားလို့ခေါ်ပါတယ်။ (၅၉)မိုင်ကနေ ချီဖွေဘက် ဆက်တက်လာရင် တွေ့ရမယ့် ကျောက်သားဂုံးတံတားပါ။
“ချီဖွေတံတား” (သို့မဟုတ်) “ဇန်နောင်ယန်” ကြိုးတံတား
လူထုဟာ ပုံမှာမြင်နေရတဲ့ လှေလေးတွေနဲ့ပဲ အရှေ့နဲ့ အနောက်ကမ်းကို ကူးလူးဆက်ဆံနေရ၊ ဈေးဝယ် ကျောင်းတက်လုပ်နေရတော့တယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/11/20110အကြံပြုခြင်း
အဆုံးသတ်မတော့ ( စစ်မုန်းသူ )
by စစ်မုန်း သူ on Monday, July 11, 2011 at 5:04am Facebook
ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီး ကြံ့ဖွတ်တွေကမတရားအနိုင်ရ လွှတ်တော်ခေါ် အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီးချိန်လောက် ကျွှန်တော်တို့အိမ်ကို ရပ်ကွက်ထဲက ဆယ်အိမ်မူးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုရောက်လာပြီး ကျွှန်တော့် ဘကြီးကိုစကားလာပြောတယ်....
“ ကိုထွန်းခင်ရေ...အရပ်သားအစိုးရတော့ပြောင်းသွားပြီဗျ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းလာမဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေပါဗျာ ...အခုရုပ်မြင်သံကြားမှာ သမ္မတကြီး မိန့်ခွန်းပြောသွားတာ နားထောင်ကြည့်စမ်းပါ...သိပ်အားရဘို့ကောင်းတာ...” ဆိုတော့
ကျွှန်တော့်ဘကြီးက ကွမ်းမြုံ့နေရာက တချက်ပြုံးကြည့်ပြီး.....စကားစလိုက်တယ်.......
“ တခါက ပေါ့ဗျာ.....ရပ်ကွက်ထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း အရူးတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်ဗျ....သူ့ အရူးရောဂါက အဆန်းသား...သားရေကြိုးတစ်ပင် ကို လက်မှာဆွဲပြီး မှန်တွေတွေ့ရင် အဲဒီ့သားရေ ကြိုးပင်ထဲ ခဲထဲ့ ပစ်ခွဲတတ်တာ....တခြားဘာမှ မလုပ်ဘူး....ဘယ်သူ့မှလည်း ရန်မလုပ်ဘူး.....အဲ...မှန်မြင်ပြီဆိုရင်တော့...မရတော့ဘူး..သူ့စိတ်ရောဂါက ထလာပြီး သားရေကြိုးပင်ထဲ ခဲထဲ့ပစ်တတ်တယ်....ကြာတော့ဗျာ...အရပ်ထဲမှာ ဘယ်ခံနိုင်တော့မလည်း...အိမ်မှာရှိတဲ့ မှန်ပြတင်းပေါက်တွေ....ကားမှန်တွေ အကုန်ကွဲတော့တာပဲဗျို့....ဒါနဲ့ အရပ်က မခံနိုင်တော့....သူ့ကိုဖမ်းပြီး စိတ်တ္တဇဆေးရုံပို့လိုက်ရတယ်လေ.....ဒီလိုနဲ့ စိတ္တဇဆေးရုံမှာ တစ်နှစ်လောက်ဆေးကုအပြီး ...သူ့ရောဂါက သက်သာလို့ ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်...နောက်တော့ မိခင်အရပ်ဆီပြန်ရောက်လာတယ်ပဲပြောပါတော့.....အားလုံးက သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ကြတယ်....သူ့ခြေနေအရပ်ရပ်က အားလုံးကောင်းသွားပြီဆိုတာ...သူ့စကားပြောဟန်..စကားအသွားအလာ..အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာကြည့်ရုံနဲ့...အကဲခတ်လို့ရပါတယ်...အဲဒီအခါကြမှပဲ...ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာရာရတော့တယ်…တနေ့ ရပ်ကွက်ထဲဖြတ်လျှောက်လာတော့…တစ်ယောက်ကတောင်နောက်သေးတယ်…ဟေ့ကောင် မင်းလက်ထဲ..ဘယ်အချိန် သားရေကြိုးပင် တွေ့ရပါ့မလည်း…လန့်နေတာ…နို့မဟုတ်ရင်…ငါ့အိမ်က မှန်ပြုတင်းပေါက်တွေခပ်လန့်လန့်ပဲကွ..ဆိုတော့…ဒီကောင်က ရှက်သွားပုံရတယ်ဗျ….ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ကမေးတယ်…အေးကွာ…အခုမင်းလည်း ကျန်းမာရေးကောင်းပြီဆိုတော့…ရှေ့ဆက်ပြီးဘာလုပ်မယ်စိတ်ကူးတုန်းဆိုတော့…..သူကပြုံးဖြီးဖြီးကြီးနဲ့….ဟီး..ကျွှန်တော် မိန်းမယူတော့မယ်ဗျာတဲ့…..အားလုံးကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်ရင်း..လက်မထောင်ပြီး အခြေနေကောင်းလာကြောင်းနမိတ်ပြကြတာပေါ့…ဒါနဲ့ တယောက်က နောက်ပြီးမေးလိုက်တယ်….မင်းက မိန်းမဘာလုပ်ဘို့ယူမှာတုန်းကွဆိုတော့………….
မင်းကလည်းကွာ…ချစ်တာ တခုထဲနဲ့ မိန်းမယူတာ မပြီးသေးပါဘူး….ချစ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာတုန်းဆိုတော့…..
…………..ထမိန်ဆွဲချွှတ်ပစ်မယ်ဗျာ……( သူ့အသံက သိပ်စိတ်မရှည်တဲ့ အသံမျိုး…သဘောက ခင်ဗျားတို့ကသိရဲ့သားနဲ့မေးနေတယ်ပေါ့ )
…………….ဘောင်းဘီဆွဲချွှတ်ပစ်မယ်ဗျာ….ဆိုတော့…အားလုံးကမျက်လုံးပြူးကုန်ပြီးပြုံးမိလိုက်ကြတယ်…. ဒီကောင်က လူပါးပဲပေါ့…………တစ်ယောက်က ကျန်လူတွေကိုမျက်စိမှိတ်ပြပြီး ဆက်မေးတယ်…..
………သူကစဉ်းစားနေရင်းက……..ပြီးမှ အသံခပ်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်……..
................ အဲဒီ့ဘောင်းဘီက သားရေကြိုးနဲ့ ….မှန်တွေပြန်ပစ်မှာပေါ့ဗျ…..တဲ့…………
ဇေကမ္ဘာ နှင့် ရွှေနံသာလယ်သမားများ ပြဿနာ(အစအဆုံး)
ZeGaBar Coltd & Shwe Nan Thar Farmer correction last.pdf
ZeGaBar Coltd & Shwe Nan Thar Farmer
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၏ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို အားပေးထောက်ခံ
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၏ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို အားပေးထောက်ခံကြောင်း လက်မှတ်ကောက်ခံမှု့
၄၉ နှစ်မြောက် ( ၇ ) ဇူလိုင် အထိမ်းအမှတ် မြန်မာသံရုံးရှေ့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသပွဲ အခမ်းအနား ( ကိုရီးယား )
11 July 2011 Yeyintnge's Diary.doc
11 July 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
11 July 2011 Yeyintnge's Diary
မတရား​ဖမ်း​ထား​သဖြင့်​ ပြန်လွှတ်​ပေး​ရန် နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ ၅ ဦး​ ​တောင်း​ဆို
Published on July 11, 2011 by နော်နိုရင်း
အစိုး ​ရ​ဟောင်း​လက်ထက်မှာ မတရား​ဖမ်း​ဆီး​ ချုပ်​နှောင်ထား​တာ ဖြစ်တဲ့​အတွက် လက်ရှိအစိုး​ရသစ်လက်ထဲမှာ လွှတ်​ပေး​ဖို့​နဲ့​ မလွှတ်ရင် အများ​ပြည်သူ​ရှေ့​မှာ အမှုပြန်လည် စစ်​ဆေး​ဖို့​ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ ၅ ဦး​က သမ္မတသစ် ဦး​သိန်း​စိန်ထံ ဒီက​နေ့​ လက်မှတ်ထိုး​ ​တောင်း​ဆိုလိုက်ပါတယ်။
မိတ္ထီလာ ထောင် (ဓာတ်ပုံ - Google Earth)
မိတ္ထီလာ​ ထောင်မှာ အကျဉ်း​ကျ​နေတဲ့​ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ ကိုထွန်း​ထွန်း​နိုင်၊​ ကိုထွန်း​ထွန်း​ဦး​၊​ ကိုညိုဝင်း​၊​ ကိုမြတ်ကိုနဲ့​ ဦး​ဉာဏ်ဝင်း​ (​ခေါ်) အရှင်စန္ဒဝရ တို့​က စု​ပေါင်း​ လက်မှတ်ထိုး​ပြီး​ ​ထောင်ပိုင်ကို စာတင်ထား​တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ​နေ့​ ​ထောင်ဝင်စာသွား​တွေ့​ခဲ့​တဲ့​ ကိုထွန်း​ထွန်း​နိုင်ရဲ့​ ဇနီး​ မ​အေး​သက်က “အစိုး​ရအသစ်က အကုန်လုံး​ကို မျှမျှတတနဲ့​ အဆင်​ပြေ​အောင် လုပ်​ပေး​မယ်လို့​ ​ပြောထား​တာကို သူတို့​ဆီမှာလည်း​ သတင်း​စာ​တွေ ဖတ်ရတယ်။ အဲဒါ​ကြောင့်​မို့​လို့​ အရင်အစိုး​ရအ​ဟောင်း​တုန်း​က မတရား​သဖြင့်​ ဖမ်း​ဆီး​ပြီး​ ​ထောင်ချထား​တယ်။ အပြစ်မရှိဘဲနဲ့​ ဖမ်း​ထား​တယ်။ အဲဒါကို အခု သမ္မတ ဦး​သိန်း​စိန်အ​နေနဲ့​ ဒီဟာကို မှန်မှန်ကန်ကန် အများ​ရှေ့​မှောက်မှာ မှန်ကန်တဲ့​ တရား​စီရင်​ရေး​နဲ့​ လွှတ်​ပေး​ရင်လည်း​ လွှတ်​ပေး​၊​ မလွှတ်​ပေး​ရင်လည်း​ အများ​ပြည်သူ​ရှေ့​မှာ ပြန်ပြီး​တော့​ စိစစ်​ပေး​၊​ မတရား​သဖြင့်​ ဖမ်း​ထား​တယ်ဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့​ လုပ်​ပေး​စေချင်တယ်။ အဲဒီအတိုင်း​ကို ​ရေး​ထား​တယ်။ ​ထောင်ထဲက​နေ သမ္မတကြီး​ ဦး​သိန်း​စိန်ဆီကို တင်​ပေး​ဖို့​ဆိုပြီး​ သူတို့​ ၅ ဦး​ လက်မှတ်စုထိုး​ပြီး​တော့​ ​ထောင်ပိုင်ကို ဒီ​နေ့​ပဲ တင်ထား​တယ်။ တင်​ပေး​မ​ပေး​ မသိဘူး​ပေါ့​” လို့​ ​ပြောပါတယ်။
ကိုထွန်း​ ထွန်း​နိုင်ဟာ ၂၀၀၈ ဇန်နဝါရီလမှာ ဖမ်း​ဆီး​ခံရပြီး​ သူ့​ကို နိုင်ငံ​တော် အကြည်ညိုပျက်​စေမှု၊​ အီလက်ထ​ရောနစ်ပုဒ်မတို့​နဲ့​ တရား​စွဲဆိုကာ ​ထောင်ဒဏ် ၁၉ နှစ် ချမှတ်ခဲ့​ရပြီး​နောက် အယူခံဝင်ရာမှာ ၇ နှစ် ​လျှော့​ပေး​လိုက်တာ​ကြောင့်​ ​ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့​ရပါတယ်။
စစ်အုပ်စုအတွင်း အာဏာလုပွဲကြီး (လာရီဂျေကင်)
စစ်တပ်လွှတ်တော် အမတ်တဦး၏ အဆိုအရ -
ဇီးအိုသစ်လှရွာ လိုအပ်ချက်များ ဒေါ်စု ရှင်းပြ
ကိုပေါက် | တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၁၉ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သားငယ် ကိုထိန်လင်းနှင့် အတူ အင်္ဂါနေ့မနက်တွင် အာဇာနည်ဗိမာန်သို့ သွားရောက် ဂါရဝပြုမည်ဟု ပါတီတွင်း သတင်းရပ်ကွက်များက
အနီးရှိ ကွယ်လွန်သူ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်၏ အုတ်ဂူသို့ သွားရောက် ဂါရဝပြုမည်။ ထို့နောက် ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဂူသွင်းမြှုပ်နှံရာ အာဇာနည်ဗိမာန်သို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့က အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာသည့် သားဖြစ်သူ ကိုထိန်လင်းမှာ မနက်ဖြန် ညပိုင်းတွင် နေရပ်ရင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာမည် ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဂူသွင်းမြှုပ်နှံရာ အာဇာနည်ဗိမာန်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သားငယ် ကိုထိန်လင်း သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထား (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
ရက် အာဇာနည်နေ့တွင် လွမ်းသူ့ပန်းခွေချကာ ဂါရဝပြုမည်ဟု တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းတွင် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်၌ ပြုလုပ်သည့်
“မနက်က သတင်းထောက်က မေးတော့ ဖိတ်ရင်သွားမှာပေါ့တဲ့။ အခုထက်ထိ ဖိတ်သေးပုံ မပေါ်ဘူးခင်ဗျ။ NLD ကတော့ ကျနော်တို့ အစီအစဉ်နဲ့ ကျနော်တို့ ရှိပါတယ်။ အခမ်းအနားလုပ်မယ်” ဟု NLD ပြောခွင့်ရ ဦးအုန်းကြိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သို့သော် မနက်ဖြန် အာဇာနည်ဗိမာန် သွားရောက်မည့် အစီအစဉ်ကိုမူ သေချာစွာ မသိရသေးဟုဆိုကာ သူက “ကျနော်ကြားတာက နက်ဖြန် ခရီးစဉ်တခု ရှိတယ်လို့ပဲ ကြားပါတယ်။ ဘယ်ရယ်ဘာညာ မသိပါဘူး” ဟု ဆိုသည်။
သွားရောက် ဂါရဝပြုခွင့်မှာ ၈ ကြိမ်သာ ရရှိခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးအကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်နှစ်များတွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ရသဖြင့် သွားရောက် ဂါရဝပြုခွင့် မရခဲ့ပေ။
“မနူဟာဘုရင်ကလည်း သိပ်လေးစားဖို့ ကောင်းတယ်၊ အကျဉ်းစံဘဝမှာတောင်မှ အနော်ရထာတို့က ကြောက်ရတယ်၊ အကျဉ်းစံဘဝကို နားလည်လို့ သူသွားတယ်၊ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း အဲလိုပဲ အကျဉ်းကျခံနေရတာတွေ များတယ်၊ အဲဒါကြောင့် အဓိက သွားတာပါလို့ ရှင်းပြတယ်” ဟု ရှင်းလင်းပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သူ သတင်းထောက်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောပြသည်။
ထို့အပြင် အာနန္ဒာဘုရား ဖူးရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ “အာနန္ဒာဘုရားဆိုရင် ကျန်စစ်သားမင်းကို ပုဂံမင်းတွေထဲမှာ
ပုဂံခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်နေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ)
ပုဂံဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စိုးရိမ်ပူပန်ပြီး၊ ပုဂံဘုရားများ ပြန်လည် ပြုပြင်ရေးများ
ကြောင့် ရှေးဟောင်း လက်ရာအချို့ ပျက်စီးသွားမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
မကြာခင် ရန်ကုန်ပြင်ပ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်များက မေးမြန်းခဲ့ကြ
သတင်းထောက်တဦးက “ နိုင်ငံရေး ခရီးစဉ် ထွက်တဲ့အခါ သွားမယ့်ခရီးစဉ်ကို အတိအကျ ပြောမှာပါတဲ့။ စည်းရုံးရေး လုပ်ပါတယ်ဆိုမှ တိုးတိုးတိတ်တိတ် သွားလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ
၂ဝဝ၃ နယ်လှည့် ခရီးစဉ်များတွင် မီဒီယာသမားများ လိုက်ပါလာနိုင်ခဲ့ပါက မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုမျိုး
ဒီလိုမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သူကလည်း ဟုတ်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကို ဖိတ်ပြီး ရေနွေးကြမ်း ခေါ်တိုက်တာပါတဲ့။ အဲဒီတုန်းက မီဒီယာတွေ မပါခဲ့လို့ အဲလိုဖြစ်သွားတာပါဆိုတဲ့ စကားဟာ မှန်ပါတယ်တဲ့” ဟု သတင်းထောက်က ဆက်ပြောပြသည်။
တနင်္လာနေ့မှာပင် ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ NLD ရုံးချုပ်တွင် ပြုလုပ်မည့် သမ္မတအကြံပေး စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးမြင့်၏ ဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်မှာ အချိန်ကပ်၍ ပျက်ပြားသွားကြောင်း ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး အဆိုအရ သိရသည်။
“မနက်က ၈ နာရီလောက်မှာ သိပါတယ်။ စီစဉ်ပေးတဲ့ ဦးစိုးဝင်းကို ဦးမြင့်က ပြောလို့။ သူ အဆင်မပြေလို့
ဒေါက်တာဦးမြင့်က ကိုယ်တိုင်ပြုစုထားသည့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေး စာတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ခဲ့ရာမှ ပျက်ပြားသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ NLD ဗဟိုခေါင်းဆောင်များအပြင် ရန်ကုန်တိုင်း အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အခြား စိတ်ဝင်စားသူများပါ တက်ရောက် နားထောင်ရန် ဖြစ်သည်။
“သူတို့ကိစ္စနဲ့ သူတို့ဖြစ်တာ၊ မပြောတတ်ဘူးဗျ။ သူတို့ကို ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းတွေ သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်ဘူး။ သူကလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ တက်တက်ကြွကြွ လိုက်လုပ်ပေးနေတာ။ သူ့ကိုတော့ ဟိုက ဘာပြောလဲ မသိဘူး။ ကျနော်တို့သိတာက ဦးမြင့် ဒီနေ့လာဖို့ရာ အဆင်မပြေပါဘူး။ အစီအစဉ်ကို
ဒေါက်တာဦးမြင့်အနေဖြင့် သူ၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးစာတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်လံ၍ ရှင်းလင်းပွဲများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နေသည့် နည်းတူ NLD ရုံးချုပ်တွင်လည်း ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ရာ NLD သုတေသနနှင့် စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဦးစိုးဝင်း ထံမှတဆင့် စီစဉ်ခဲ့ကြောင်း ဦးတင်ဦးက ပြောပြသည်။
ထက်အောင် Monday, 11 July 2011 17:40 ဆောင်းပါး
ဦးတေဇ၊ သားနှစ်ယောက်နှင့် သမီး (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၏ မြန်မာ့ဒီ...
မတရား​ဖမ်း​ထား​သဖြင့်​ ပြန်လွှတ်​ပေး​ရန် နိုင်ငံ​ရေ...